बलिउडका सर्वाधिक ५ महँगा निर्देशक ! – Everest Dainik – News from Nepal
बलिउडका सर्वाधिक ५ महँगा निर्देशक !
कविर खान फिल्म निकै सानदार बनाउँछन् । उनी धेरै पारिश्रमिक लिने निर्देशक पनि हुन् । उनी हरहमेसा आफ्नो फिल्मको बारेमा सोच्ने गर्दछन् । उनी निर्देशकको अलवा लेखन र छायाँकार पनि हुन् । कबिर एक बर्षमा ४०० करोड भन्दा बढी कमाउने निर्देशक हुन् ।
हरेक फिल्ममा नैतिक सन्देश दिने राजकुमार हिरानीको बिषेशता नै हो । उनी फिल्ममार्फत युवा र किशोर दर्शकमा पुग्ने कोसिस गर्दछन् । उनले आमिर खानका साथ ३५० करोड भन्दा पनि बढी आम्दानीका लागि प्रेरणात्मक फिल्ममा काम गरिरहेका छन् ।
रोहित पनि बलिउडका धनी निर्देशक बनेका छन् । उनलाई तीन चलचित्रले यो स्थानमा पुर्याएको हो । उनका फिल्म ‘चेन्नई एक्सप्रेस’, ‘दिलवाले’ र ‘सिंघम स्क्रिन’ उनका महत्वपूर्ण फिल्मका उदाहरण हुन् । उनी बढी कमाउने निर्देशकमा पर्दछन् ।
फरहान अख्तर र जोया अख्तरः
यी दुवैले बलिउडमा राम्रा फिल्म बनाएका छन् । फरहान र जोया दिदीभाई हुन् । यी दुवै एकसाथ लोकप्रिय छन् । दर्शकको मनोरञ्जन ध्यानमा राखेर यी दुवैले फिल्म बनाउने गरेका छन् ।
उनीहरुका फिल्मले बलिउडमा एक नयाँ आयाम बनाएका छन् । यीनको फिल्म ‘दिल चाहता है’ र ‘जिन्दगी नामिलेगी दोबारा’ बलिउडमा सुपरहित साबित भयो । यी दुवै पनि बलिउडमा धेरै कमाउने निर्देशकमा पर्दछन् ।
फिल्मबाट दर्शकको मन जित्ने निर्देशक हुन् अरबाज खान । जसको उदारण ‘दबंग’लाई लिन सकिन्छ । धेरै हिट फिल्म नदिए पनि उनी धेरै पारिश्रमिक लिने निर्देशकमा पर्दछन् । -एजेन्सी
ट्याग्स: Indain film director, rajkumar hirani